Fubo တီဗီမှပေးထားသောအရာအားလုံး၊ ဈေးအသက်သာဆုံး Movistar Series | Androidsis
ငါအသေးစိတ်အမျိုးမျိုးတို့ကိုနှင့်အတူမှတ်ချက်ပေးသောဗီဒီယို post ကို, ကြည့်ရှုရန်စာရင်းပေးသွင်းခြင်းဝန်ဆောင်မှု streaming မှတဆင့်တိုက်ရိုက်တီဗီယခုအချိန်တွင်စျေးအသက်သာဆုံး၎င်းကိုမီးမောင်းထိုးပြရန်ထိုက်သင့်သောလမ်းကြောင်းများ Movistar စီးရီးကိုလစဉ်ယူရို ၃.၉၉ ဖြင့်သာလစဉ်ကြေး ၁၃ ခုထပ်မံယူဆောင်သည် လုံးဝအခမဲ့တာဝန်မဲ့7ရက်ကြာရုံးတင်စစ်ဆေးကာလနှင့်အတူ။
နောက်တစ်ခုကဗီဒီယိုမှာရောဒီတူညီတဲ့စာထဲမှာပါ Fubo TV ကိုကျွန်တော်ကောင်းကောင်း၊ မကောင်းတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုမှတ်ချက်ပေးဖို့ Fubo တီဗီကိုတိုက်ရိုက်တီဗွီကြည့်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုကမ်းလှမ်းတယ်။ ၎င်း၏အကြီးမားဆုံးတောင်းဆိုချက်မှာ Movistar စီးရီးဖြစ်သည် အားလုံးကတည်းက အခြားလိုင်းများမှာလွတ်လပ်စွာနှင့်အခမဲ့ထုတ်လွှင့်သောစပိန် DTT ချန်နယ်များဖြစ်သည်။ Movistar စီးရီးအတွက်ယူရို ၃.၉၉ ပေးရကျိုးနပ်လား။
1 Fubo တီဗီကကျွန်တော်တို့ကိုကမ်းလှမ်းတာအားလုံး
2 Android Tablets (သို့) TV Box အတွက်အဆင်မပြေတဲ့ user interface တစ်ခု
4 Demand on Movies on Demand အပိုင်းကတော်တော်လေးကောင်းပါတယ်
6 Movistar စီးရီးကို TV Box မှမမြင်နိုင်ပါ
7 Movistar စီးရီးအလွန်ဆင်းရဲသောစီးရီးကမ်းလှမ်းမှုကို
ငါဒီ post ရဲ့အစမှာဖော်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်းအခြေခံအားဖြင့်လျှောက်လွှာ Fubo TV သည်ကျွန်ုပ်တို့အားတိုက်ရိုက်ရုပ်မြင်သံကြားဝန်ဆောင်မှုကိုပေးသည်၊ ၎င်းတွင်၎င်း၏အကြီးမားဆုံးစီးပွားဖြစ်တောင်းဆိုချက်မှာ Movistar Series ရုပ်သံလိုင်းဖြစ်သည်.
ပါဝါအပြင် Movistar စီးရီးကိုတစ်လလျှင်ယူရို ၃.၉၉ ဖြင့်သာကြည့်ရှုနိုင်သည်ယနေ့ရုပ်မြင်သံကြားဈေးကွက်တွင်အသက်သာဆုံးနှုန်းထားဖြင့်ဖူဘိုတီဗွီသည်စပိန်နိုင်ငံသား DTT လိုင်း ၁၃ ခုကိုလည်းပေးထားသည်။ ၎င်းတို့ထဲတွင် AtresSeries၊ Antena 13၊ La Sexta၊ Nova၊ Neox၊ Mega၊ Clan TV၊ TVE လိုင်းနှစ်ခု၊ La 3, TDP နှင့် ၂၄ နာရီတို့ဖြစ်သည်။
ဤအရာအားလုံးကိုကျွန်ုပ်တို့လုပ်နိုင်သောအမျိုးအစားများကိုထည့်ပါ အားကစား၊ စီးရီး၊ ရုပ်ရှင်များ၊ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှပရိုဂရမ်ဂရစ်သို့မဟုတ်မှတ်တမ်းတင်ထားသောနေရာများမှအကြောင်းအရာများကိုစီစစ်ပါ ကျွန်တော်တို့ရရှိနိုင်သမျှအတွင်းမှာကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုမှတ်တမ်းတင်ဖို့တစ်လကိုနာရီ ၃၀ လောက်အသံသွင်းပေးပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာတိုက်ရိုက်တီဗွီကိုကြည့်ရှုခြင်းနှင့်အမှန်တရားကအရမ်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ streaming တွေကိုကြည့်ရှုဖို့လျှောက်လွှာတစ်ခုမတိုင်ခင်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်။
ငါအရမ်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ application ကိုapriori လို့ပြောတဲ့အခါငါအဲဒါကိုစာသားအတိုင်းပဲဆိုလိုတာပါ၊ အဲဒါကိုလေးရက်ကြာစမ်းသပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ Fubo TV ဟာအစိမ်းရောင်ဘယ်လောက်ထိရှိနေဆဲကိုငါသိလိုက်ပြီ။
Android Tablets (သို့) TV Box အတွက်အဆင်မပြေတဲ့ user interface တစ်ခု
လျှောက်လွှာတင်ထားသည့်အဓိကအားနည်းချက်မှာထိုအရာဖြစ်သည် Android Tablets (သို့) TV Box မှာကောင်းကောင်းမခံစားနိုင်ပါအကြောင်းပြချက်မှာ user interface ကိုကောင်းကောင်း အသုံးချ၍ ၎င်း၏လုပ်ဆောင်မှုအားလုံးကိုရယူရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဒေါင်လိုက် mode တွင်ဟုတ်ကဲ့သို့မဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အသုံးပြုရမည်ဖြစ်သည်။ TV Box တွင်သင်နားလည်နိုင်သည့်အတိုင်း၊ တက်ဘလက်ကအရမ်း, အလွန်မသက်မသာဖြစ်ပါတယ်။
သုံးရက်သာအသုံးပြုပြီးနောက် Fubo TV ၀ န်ဆောင်မှုကိုကျွန်ုပ်၏ကြေးပေးသွင်းခြင်းကိုပယ်ဖျက်စေသည့်နောက်အချက်တစ်ခုမှာ၎င်း၏စီးရီးအမျိုးအစားတွင်အသုံးမ ၀ င်ခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်ဟာတစ္ဆေလို့ခေါ်ဆိုနိုင်တဲ့သတင်းအချက်အလက်မျှသာဖြစ်လို့အဲဒါကိုကျွန်တော်တို့ကိုသာအကျိုးပြုမှာပါ။ သိပ်မကြာသေးခင်ကမှလွန်ခဲ့သောစီးရီးအသစ်များနှင့် Movistar Series မှရှားပါးသောအချိန်များကိုတွေ့မြင်ရန်ကံကောင်းခြင်းနှင့်အတူ.
Demand on Movies on Demand အပိုင်းကတော်တော်လေးကောင်းပါတယ်
ဝယ်လိုအားရှိသောရုပ်ရှင်အပိုင်းကစီးရီးအမျိုးအစားသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုမကမ်းလှမ်းနိုင်သည့်အခွင့်အရေးကိုပေးသည်။ ဤအမျိုးအစားမှကျွန်ုပ်တို့သည် Fubo TV မှပေးသောကွဲပြားသောချန်နယ်များမှရုပ်သံလိုင်းများကိုသူတို့ကြည့်ပြီးသည့်အချိန်အထိကြည့်ရှုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ထုတ်ပေးသည်
Fubo TV ၏ဤနောက်ဆုံးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု၏နောက်ဆုံးအပိုင်းသည်လုံးဝဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်လျှောက်လွှာက Fubo TV ၏ရုပ်မြင်သံကြားကမ်းလှမ်းမှုတွင်ပါ ၀ င်သည့်ရုပ်သံလိုင်းများမှထုတ်လွှင့်သောအကြောင်းအရာများကိုအသံသွင်းရန်တစ်လလျှင်နာရီ ၃၀ အထိအခမဲ့နေရာပေးနိုင်သော်လည်း၎င်းသည် , ဒီမှတ်တမ်းတင်အပိုင်းကကျွန်တော်တို့ကို Movistar စီးရီးမှာသုံးနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးကိုမပေးဘူး.
ဒါပေမယ့်ဒါကမလုံလောက်သေးပါဘူး။ Real-time recording တကယ်ကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်နိုင်ပေမဲ့၊ ကျွန်တော်တို့လိုချင်တာတစ်ခုကတိကျတဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုရဲ့နေ့စွဲဒါမှမဟုတ်အချိန်မှာအချိန်ဇယားဆွဲချင်ရင်ဒါကလုံးဝဆိုးပါတယ်။ ဥပမာ, Tierra Hostil မှာ Jalis de la Serna အစီအစဉ်ကိုနှစ်ရက်ကြိုတင်စီစဉ်ထားပြီးမမေ့နိုင်အောင်စီစဉ်ထားတယ်, နှင့်ကျွန်ုပ်ပြုလုပ်ခဲ့သောအသံသွင်းစာရင်းသို့သွားပြီးမှတ်တမ်းတင်ထားသည့်ပရိုဂရမ်ကိုကြည့်ရှုရန်အဆင်သင့်ဖြစ်သည့်အခါကျွန်ုပ်အံ့အားသင့်ခဲ့ရသည်၊ အဲဒီအစားငါအဲလ်ဘတ်တို Chicote ၏မီးဖိုချောင်ထဲမှာအိပ်မက်ဆိုးအစီအစဉ်ကိုမှတ်တမ်းတင်ခဲ့တယ်ဤအရာသည်မှတ်တမ်းတင်ခြင်းမှရွေးစရာမဟုတ်သော်လည်းရိုးသားရန်အတွက်ကျွန်ုပ်ကြိုက်သည်။
Movistar စီးရီးကို TV Box မှမမြင်နိုင်ပါ
ငါဖော်ပြခဲ့သည့်လျှောက်လွှာကို TV Box တွင်အသုံးပြုရန်အတွက်ရုပ်ပုံပုံတူနှင့်ပုံတူစနစ်တွင်အသုံးပြုရန်မသင့်လျော်သော်လည်း၎င်းသည်လျှောက်လွှာကိုအကြီးအကျယ်စိတ်ပျက်စေခဲ့သည်။ ဒီ Android ထုတ်ကုန်များမှသုံးနိုင်မယ်ဆိုရင်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်တဲ့ကွဲပြားသောချန်နယ်များ။ ဤလမ်းညွှန်သို့မဟုတ်ဇယားကွက်မှကျွန်ုပ်တို့ Movistar စီးရီး မှလွဲ၍ Fubo တီဗီလိုင်းအားလုံး၏ထုတ်လွှင့်မှုကိုကြည့်ရှုနိုင်သည်.
ငါမှတ်ချက်ပေးသောအရာအားလုံးကိုလျှင်ကျနော်တို့ထည့်ပါ Fubo TV ရှိသည့်တစ်ခုတည်းသောလစာပေးသောချန်နယ်ကကမ်းလှမ်းသည်ဆိုးဝါးသောစီးရီးစာရင်းသူတို့ကကျွန်တော့်ကို Fubo TV ငွေပေးချေမှု ၀ န်ဆောင်မှုကိုဆက်လုပ်မလုပ်နှင့်အမြန်ဆုံးဆုံးဖြတ်ရန်ကျွန်ုပ်အတွက်အလွန်လွယ်ကူသည်။
ငါပြောခဲ့သမျှအရာအားလုံးအတွက်၊ Android အတွက်တရားဝင်လျှောက်လွှာသည်မည်မျှအစိမ်းရောင်ရှိနေသောကြောင့် Fubo TV ၀ န်ဆောင်မှုမှ ၇ ရက်ကြာအခမဲ့ရုံးတင်စစ်ဆေးမှုမတိုင်မီတွင်ကျွန်ုပ်သည်မနှစ်မြို့ဖွယ်ဖြစ်ရပ်တစ်ခုကိုပယ်ဖျက်ရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။ ကတည်းကအံ့သြစရာ သင်သည်ဝန်ဆောင်မှုသို့စာရင်းသွင်းခြင်းကိုပယ်ဖျက်သောအခါသူတို့သည်စာချုပ်ကိုချုပ်နှောင်သောအခါသင်ကမ်းလှမ်းခဲ့သည့်ခုနှစ်ရက်ကြာအခမဲ့ရုံးတင်စစ်ဆေးခြင်းကိုလေးစားမှုမရှိဘဲလမ်းပေါ်မှထုတ်ပစ်လိုက်ကြသည်။.
ဤသည်မှာယနေ့ကျွန်ုပ်တို့တိုင်းပြည်တွင်အခြားမည်သည့် streaming ကြည့်ရှုသည့်ဝန်ဆောင်မှုကိုမျှလုပ်ဆောင်ခြင်းမပြုပါ Netflix၊ HBO သို့မဟုတ် Sky သည်သင်၏အခမဲ့ရက် ၃၀ ကြေးပေးသွင်းမှုကိုလေးစားသည် ဝန်ဆောင်မှုငှားရမ်းခြင်း၏တစ်ချိန်တည်းမှာသင်ကဆက်လက်ရပ်ဆိုင်းရန်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android application များ » Fubo တီဗီမှကျွန်ုပ်တို့အားကမ်းလှမ်းသည့်အရာအားလုံး၊ Movistar စီးရီးအတွက်ကြေးပေးသွင်းခြင်းနှင့်နောက်ထပ်ရုပ်သံလိုင်း ၁၃ ခုနှင့်စျေးကွက်အတွင်းစျေးအသက်သာဆုံးဖြစ်သည်